वर्तमान सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशलाई थोरै परिमार्जन गरेर संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेस गरेको छ । लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरू र रोल्पा, प्युठान र रुकुमको पूर्वी भेगलाई प्रदेश नम्बर चारमा राख्ने प्रस्ताव भएको छ । यसो गर्नुका प्रमुख कारण के हुन् त ? नेपालमा २५० वर्षसम्म एकात्मक राज्य व्यवस्थाले चलेकाले अनेकौं भाषा, धर्म र..
लालबाबु पण्डितले सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा उठाएका कतिपय विषय मलाई राम्रै लागेका थिए । ..
नेपालको हस्तकला र नेताहरूको दरिद्रता
नेपाको चिनारीसँग जोडिएको नेपाली हस्तकलासँग जोडिएको १४आँै हस्तकला मेला भर्खरै सम्पन्न भएको ..
संविधान बन्न पाएको छैन संशोधनको कार्य सुरु भएको छ । यदि जनताका हितका लागि आवश्यक हो भने सं..
२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदै गर्दा नेपाली जनतामा केही आशाको जागेको थिय..
मधेसी दलका नेता र भारतले भनेजस्तो सीमाङ्कन वा संविधान संशोधन गरेर तराईको विकास र तराईवासीको हित कदापि हुन् सक्दैन । तराईको समस्या दीर्घकालीन रुपले समाधान हुन् पनि सक्दैन । पाँच विकास क्षेत्रलाइ नै ५ प्रान्त बनाएको भए अति वैज्ञानिक र सबैलाई मान्य हुने थियो । उत्तर र दक्षिण मिलाएर चार वा पाँचवटा राज्य बनाउँदा राम्रो […]
इँटा उद्योगको रापमा बालबालिका
बालबालिका भोलिका कर्णधार हुन । भविष्यमा देशको विकासका लागि कस्तो तयार गर्ने भन्ने कुरा देशले आफ्ना बालबालिकालाई दिने शिक्षा दीक्षामा निर्भर रहन्छ । अनि तिनीहरु कस्तो वातावरणमा हुकँदैछन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । हाम्रो देशमा आर्थिक रुपमा सम्पन्न परिवारका बालबालिकाको बारेमा अभिभावक सचेत भए पनि आर्थिक रुपमा कमजोर परिवार..
फ्रान्सेली दार्शनिक रुसोले भनेका छन्– ‘मानिस जन्मदा स्वतन्त्र रुपमा जन्मन्छ तर पछि उसले बन्ध नै बन्धन पाउँछ ।’ हो, मानिस जति स्वतन्त्र रुपमा जन्मन्छ तर, उसले आफ्नो उमेरको वृद्धिसँगै आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउँदै जान्छ । संसारमा मानिसले स्वतन्त्रताका लागि ठूल्ठूला लडाइँ लडेका छन् । मूलतः राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्ष, आन्दोलन,..
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले लामो समय वितिसकेको छ । आर्थिक उन्नति नहुँदा सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरु विग्रने स्थिति बढ्दै गएको छ । हिजोका दिनमा परिवर्तनका लागि ध्वंशात्मक राजनीतिक गर्दै आएका नेपालका राजनीतिक दलहरु अब विकासवादी दल बन्नेतर्फ अघिबढिरहेका छन् । यो सुखद् पक्ष हो । तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टी परित्याग गर्दै नयाँ श..
कुनै सन्तानलाई आमाको मायाप्रति प्रश्न उठाउनु कहिल्यै सान्दर्भिक हुँदैन । किनभने एउटा सन्तानको आमाप्रति सद्भाव र मायालाई दुई चार अक्षरमा सीमित गर्न सकिँदैन । त्यसरी नै जनताको लागि राजनीतिमा होमिने नेतालाई पनि देशप्रेमप्रतिका सवाल फगत सावित हुनुपर्ने हो । तर अपसोच हाम्रो देशमा देश र जनताको लागि भनेर राजनीतिमा होमिने नेतृत्वप्रति र..
पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल अदिमा आजभोलि आफन्त बितेका समवेदना, सम्झनाका पोस्टहरू देखिन्छन्, सुनिन्छन् । हरेक त्यस्ता पोस्ट हेर्दा त्यो परिवारप्रति माया जाग्छ, समवेदना आउँछ । हुन त जन्म र मृत्यु आफ्नो हातमा हुँदैन । दिन आएपछि कसैको केही लाग्दैन । जब आफन्तहरु साथमा हुन्छन्, यी दुई यथार्थमा हाम्रा धर्म संस्कारसँगै जोडिएर आउने क्रिय..
विदेशमा नेपाललाई चिनाउने वस्तु के हो भनेर विदेश यात्राबाट फर्किएकाहरूलाई सोध्दा पाइने एउटै जवाफ हुन्छ, नेपाली हस्तकला । नेपालको चिनारीसँग जोडिएको यही हस्तकलासम्बन्धी बृहत् प्रदर्शन भोलिदेखि चार दिनसम्मका लागि प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन हुँदै छ । यही प्रदर्शनीको शोभा बढाउनका लागि हस्तकला व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति वि..
मधेसी राजनीतिक दलले सीमाङ्कनका विषयसहितको संविधान संशोधन सम्बन्धी तीनबुँदे सहमति गरेका थिए । सहमतिपछि सरकार निर्माणमा सहयोग गरेका थिए । अहिले सरकारबाट संशोधनमा भइरहेको ढिलाइप्रति मधेसी दल रुष्ट भएको अवस्था छ । नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले पार्टीबीच सहमति हुन अझै बाँकी भएकाले पनि प्रस्ताव दर्ता गर्न ढिलाइ हुँदै आएको ..
कञ्चन शर्मा अनि पुरुष हिंसा !
फेरि एउटा कुराले पुरुष हुनुमा ग्लानि तुल्यायो । तर ग्लानि धेरै दिन टिक्न सकेन । पुरुष प्रधान समाजले गर्दा महिला हिंसा बढ्यो भन्ने महिला अधिकारवादीको कुरामा विश्वास गर्दा कतिबेला पुरुष भएर जन्मेकोमा चित्त दुख्छ । हुन त चाहेर महिला हुने या पुरुष भइने हैन । तर बेलाबेला पुरुषप्रति हुने सानो कुरामा मन कुँडिन्छ । अस्ति […]
नयाँ सविधान जारी भएको १४ महिना पूरा भएको छ । यतिबेला संविधान जारी भएदेखि त्यसमाथि असन्तुष्ट जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका मधेसी मोर्चा, थारु र आदिवासी जनजातिसहितको माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसी मोर्चासहितको समर्थनमा गठन भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्र..
डा. गोविन्द केसी पुनः अनशन बसिरहेका छन् । उनको माग र शैलीका समर्थकको सङ्ख्या गुणात्मक र सङ्ख्यात्मक रूपमा घट्दै गइरहेको छ । डा. के.सी.को यो कार्य हाम्रो समाजको एक चरम निरासावादी सोचको नमुना हो । हाम्रो सोच कस्तो भइसक्यो भने हामी हरेक चीजको समस्या राजनीति र राजनीतिकर्मीमा मात्र देख्ने गर्छौं । राजनीतिकर्मी इतरबाट भइरहेको चरम [&he..
नेपालमा हाल देखिरहेको राजनीतिक अवस्थाले करोडौँ नेपालीको मन खिन्न भएको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि हालसम्मको राजनीतिक उतार चढावलाई एक सामान्य नागरिकले भोगेको दुःख र अनुभवको महसुस राजनीतिक दलका नेताहरूले कहिल्यै गरेनन् । जनताप्रति उत्तरदायी नभएर, राष्ट्रप्रतिको माया भएर नै हो । सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय, सरकारी कर्मचारी, ..
देशका जनतालाई नियमित विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने अहम् जिम्मेवारी बोकेर बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विगतका यिनै समयमा अति व्यस्त हुन्थ्यो तर विडम्बना त्यो व्यस्तता जनतालाई राहत दिनमा होइन कि हप्ता–हप्तामा लोडसेडिङका तालिका प्रकाशित गरेर आम जनमानसलाई आहत दिनमा थियो । लाग्थ्यो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काम विद्युत् सेवा आपूर्ति ..
के चाहन्छ एमाले ?
संविधान बनेपछि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यसको नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने भन्ने भद्र सहमति भएको कुराले त्यतिबेला मिडिया तातेको थियो । त्यो भद्र सहमतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा पनि उठेको थियो तर संविधान बनिसकेपछि नेपाली काँग्र्रेसले सो सहमति पालना गर्न कुनै तदारुकता देखाए..
केही वर्ष पहिले डा. चित्र वाग्लेको बारेमा धेरै सुने । उनी यस्ता समाजसेवी, उस्ता समाजसेवी भनेर, चर्चा गर्न लायक मान्छे पनि हुन् उनी । उनको बारेमा हामी चर्चा मात्र सुन्छौँ तर उनले सेवा दिएका जिल्लावासी उनलाई भगवान्कै रूपमा लिन्छन् । कारण डाक्टरलाई भगवान् मान्ने एक किसिमको विचार नेपाली समाजमा व्याप्त छ । सुगमको राम्रो कमाइ [&helli..
एक्काइसौँ शताब्दीमा विश्वमा विज्ञान, प्राविधि र सूचना, सञ्चारको विकास चरम चुलीमा पुगिसकेको छ भने विश्वाव्यापीकरण अनि भूमडलीकरणको अवधारणाले अजाको विश्वालाई खुम्च्याएको हामी अनुभव गर्न सक्छौँ, जब विश्वाको विभिन्न ठाउँबाट विविध विशेषता भएको विविध धर्म संस्कृत भाषाको मान्छेहरु एउटै कार्यथलोमा साझा लक्ष्य प्राप्तिको लागि काम गरिरहेका..
सरकार राज्यकोषमाथिको ब्रह्मलुट कहिलेसम्म
सरकारले काँग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई स्वस्थ्य उपचार खर्च स्वरूप पचास लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै त्यसको चौतर्फि विरोध भइरहेको छ । सञ्चार माध्यमदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालमा समेत त्यस विषयमाथि चर्को आलोचना भएको छ । यसअघि पनि स्वास्थ्य उपचारको नाउँमा सत्ता र सरकारमा रहनेहरू र पूर्व विशिष्टहरूलाई पहुँचकै आधारमा ठूलो रक..
नेपाली काङ्ग्रेसकी नेतृ सुजता कोइराला यतिबेला क्यान्सरसँग जुधिरहेकी छिन् । भलै उनी नेपालकी पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं उपप्रधान मन्त्री हुन् । उनी अहिले बिरामी छिन्, उनलाई अहिले साथ, सहयोग माया र उपचारको खाँचो छ । उनलाई उपचार गर्न केही रकमको आवश्यकता छ । उनको उपचारका लागि उनको धनपैसा प्रर्याप्त छ छैन उनैले जानुन । तर […]
कामरेड चाचाको सङ्घर्षमय जीवनका केही पाटा
कम्युनिस्ट आन्दोलनका अविरल योद्धा भक्तिप्रसाद पाण्डे कमरेड चाचा अब हामीवीच रहनुभएन तर उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनमार्फत नेपाली समाजलाई गरेको सेवाको महत्व हामी कहिल्यै विर्सने छैनौँ । कक्षा ८ मा पढ्ने अवस्थाको बाल्यकालबाटै समाज परिवर्तनका लागि तात्कालीन सामन्ती राज्य व्यवस्थाका विरुद्धको राजनीतिक सङ्गठनमा लाग्नुभएका चाचा जीवनभरी सत..
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू विषय : अरुण पुल पीडितको क्रन्दनका बारेमा महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यू नमस्कार, म भोजपुरबाट अरुण पीडितका समस्या यहाँ समक्ष पेश गर्दैछु । तपाईंले मङ्सिर १ गते मात्रै खोटाङ ओखलढुङ्गा जोड्ने जयरामघाट पुल निर्माण चाँडै सक्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । त्यस विषयले मलाई खुसी लागेको छ । किनभने जाम भएर ब..
भीभीआईपीको नाममा राज्यकोषको दुरूपयोग कहिलेसम्म ?
हालै मात्र नेपाल सरकारले नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइरालालाई स्तन क्यान्सरको उपचार गर्नका लागि भन्दै ५० लाख रूपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ । गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोइरालालाई सो रकम दिने निर्णय गरेको हो । विशिष्ट पदाधिकारीलाई जीवनभरमा एक पटक अधिकतम १५ लाखसम्म उपचार खर्च दिन सकिने गरी स्वास्थ्य मन्त्रा..
जीवन निर्वाहका लागि जब व्यक्तिले कुनै काम, पेसा वा व्यवसाय पाउँदैन अनि ऊ बेरोजगार हुन्छ । नेपालमा बेरोजगारी समस्या एउटा प्रमुख समस्या हो । व्यक्तिमा काम गर्ने इच्छा र योग्यता हुँदाहुँदै पनि काम नपाएर त्यसै बस्नुपर्दा हाम्रो आर्थिक प्रगति ऋणात्मक भएको छ । पहिला एसएलसी उत्तीर्ण व्यक्ति कमै मात्र बेरोजगार हुन्थे भने अहिले स्नातकोत्..
‘बाख्रा पाल्न र साग रोप्न नि नमिल्ने बस्ती बनाएर सञ्चार माध्यममा यत्रो खैलाबैला ?’ ‘काजीसाप तीन हात माथि उफ्रिए ! भाङकाजी नै उफ्रेपछि सक्किगोनि । ओ ! ‘आँङकाजी’ पो हो क्यारे उनको नाउँ त ! तैपनि अङ्कल भाङ खाएर ब्युँझेसरी बोल्दिने गर्छन् बेलाबेला र यही नाम अलिक बढी फाप्या देख्छु अचेल । धुर्मुस, सुन्तलीले छ […]